साम्भा पासवानकाे प्रश्न : चामल सकियाे भरेदेखी के खाने ? : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks साम्भा पासवानकाे प्रश्न : चामल सकियाे भरेदेखी के खाने ?
दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू भाेकभाेकै बस्न विवस छन्
सिमरा । लकडाउन सुरु भएपछि हुनेखानेले घरमै बसेर मिठो पकवानसंगै इन्टरनेट र टेलिभिजन हेरेर दिन बिताईरहेका छन् । सामाजिक संजालभरी घरघरका कहानी पोस्टिएका छन् । ‘आजको परिकार’ कोरोना स्टाइललायत पोस्टिन्छन् ।
स्यानिटाइजर बेचेरै औषधी पसलेलाई भ्याई नभ्याई छ । उता मास्कको कालोबजारी मौलाएको छ । तरकारीको दररेट आकासिंदो छ । खाद्यान्न पसलमा उत्तीकै भिड छ ।
मरिन्छ कि भन्ने पीर संगै हुनेखानेले होम क्वारेन्टाइनमा राम्रेैसंग बासिरहेका छन् । सरकारले पनि लकडाउन गरी होम क्वारेन्टाइन नबस्ने बिरुद्ध प्रहरीलाई कठोर हुन आदेश दिइरहको छ ।
तर, बारामा ज्यालादारी र बिहानभरी काम गरेर बेलुका छाक टार्ने परिवारहरुको जीवन भने कठिन बन्दै गइरहेको छ ।
मंगलबार बाराको सिमरा स्थित कोरोना अस्थाई अस्पताल अघि नगरपालीकाले संक्रमण बिरुद्धको औषधी छर्किने कार्यक्रमको भिडमा नजिकै घर भएकी साम्भा पासवान आइपुगिन ।
‘यहाँ चामल बाँडन लागेको हो ?’ उनले जिज्ञासा राखिन् । उनले गुनासो थियो ‘ खानेकुरा सकियो । हिँजो माइतीबाट ल्याएको चामल पनी सकिनै लाग्यो ।’
चिया खाइरहेका केहीले उनलाई हातमा पाउरोटी र चिया थम्याइदिए । तर उनले घर लैजाान खोजिन । ‘चारवट बच्चा छन् , हामी घरमै बाँडेर खान्छौँ ।’ उनले निरास हुँदै भनिन् ।
साम्भाको भनाई अनुसार उनले माइतीबाट ल्याएको चामल बेलुकाकालाई मात्रै पुग्ने छ । नगरपालीकाले केही दिन्छ कि भन्ने आस गरेकी रहिछन् र भीड देखेपछि चामल बाँडेको अनुमान गर्दै आएकी रहिछन् । तर नगरपालीकाले बाटोमा औषधी छिट्न तयारी गरेको भन्ने सुनेपछि निराश हुँदै घर फर्किइन् ।
पथलैया बिरगञ्ज औद्योगिक करिडोर स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बाँसले बेरेको घर छ उनको । उनी जस्तै छाक टार्न नसक्ने अन्य धेरै परिवार छन् गाउँमा । प्राय गाउँका सबै ज्यालादारी र मजदुरी गरेर छाक टार्थे । लकडाउन पछी २÷४ दिन पुग्ने छाक उनीहरुले खाइसके । अब कमाउने ठाउँ पनी छैन, खाने छाक पनी छैन ।
राम्भाको घरसंगै जोडिएको नागेन्द्र प्रसाद यादवको हिँजो साँझ चुल्हो बलेन । बिहान छिमेकीको घरबाट सापटीमा एक छाक चामल ल्याएर एकछाक खाए । अब भोलीको छाक कसरी टर्ला भन्ने पिरले उनीहरुलाई सताइरहेको छ ।
वडाले खानेकुरा दिन्छ रे भन्ने उनीहरुले सुनेका छन् । तर चुनावमा भोट माग्दा बोलेजस्तो अपठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न कोही नआउने रहेछन् भन्ने नागेन्द्रलाई लागेको छ ।
‘अब तपाईहरुले केही गरिदिए बाँच्ने हो, नत्र के खाने ?’ उनले आग्रह गर्दै भने । नगरपालीकाले भने प्रत्येक वडामा समिती नै गठन गरेर घरघरमा खाद्यान्न पुर्याउने र नागरिकका समस्या समाधान गर्ने भन्दै समिती समेत गठन गरेको छ । यस्तै बिपन्न र दैनिक ज्यालादारीका नागरिकलाई लकडाउन अवधीभर सामान्य खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन खाद्यान्नको प्याकेज बितरण गर्न भन्दै प्रत्येक वडामा लगत संकलन गर्ने कार्य शुरु गर्रे तयारी गरिएको छ ।
तर चुल्हो निभ्नै लागेका नागेन्द्र र साम्भा जस्तै गाउँमा अन्य धेरै छन् । उनीहरुलाई संक्रमणको भन्दापनी भोकसंग लड्न ठुलो चुनौती छ । उनीहरुसंग न मास्क छ न स्यानिटाइजर । केवर छाक टार्ने ध्याउन्न मात्र छ ।
यसरी दलित र गरिब बस्तीहरुमा स्थानिय तहले लकडाउन अवधीभर बेलैमा खाद्यान्नको जोहो नगर्ने हो भने उनीहरुलाई संक्रमणले भन्दा भोकले छिट्टै थल्याउँछ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको बताएका छन् ।
उनले भने, “सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक...
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाको उच्च, महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन हचुवाको आधारमा गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायले...
रासस - October 11, 2020
राजनीति राजधानी समाचारदाता - August 7, 2020
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - February 16, 2020
काठमाडौं । शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले काठमाडौं उपत्यकाको पार्किङ व्यवस्थापनमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौ महानगरपालिकामा अर्याल, राजश्व सचिवमा पुडासैनी
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - March 2, 2020
काठमाडौ । सरकारले काठमाडौ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा एकनारायण अर्याललाई पठाएको छ । हाल रहेका सहसचिव मध्ये ...
कला एजेन्सी - June 3, 2020
आलु उत्पादनमा ३० प्रतिशत गिरावट
अर्थ राजधानी समाचारदाता - February 23, 2020
कञ्चनपुर । आलु उत्पादनमा यो वर्ष ३० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । हिउँदे झरी र डढुवा रोगको संक्रमणका कारण आलुको उत्पादनमा...